မာရိသညျ Winkler, 32, Selmer, Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စတုတ္ထလမ်းဘုရားကျောင်းခရစ်တော်၏ parsonage မှာ 2006 ခုနှစ်, သူမ၏ခင်ပွန်း, မဿဲ Winkler ၏ ShotGun ပစ်ခတ်မှုသေခြင်းတရားများအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်လူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ သူမကထိုစုံတွဲရဲ့လူငယ်သုံးဦးသမီးတို့သိမ်းယူခဲ့ဘယ်မှာ Alabama အဘိဓါန်အတွက်အောက်ပါနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
မာရိသညျ Winkler သို့ပြန်သွားရန်သမီးလို
စက်တင်ဘာ 11, 2007
သူမကသူမ၏ဝန်ကြီးခင်ပွန်းရိုက်ကူးပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်ပြီးနောက်မှသာ 67 ရက်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးက Tennessee ပြည်နယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယခုအခါသူမ၏ကလေးများကျောရရန်တရားရုံးထံတောင်းဆိုမှုသည်။
သူမကမတ်လ 2006 ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရစဉ်ကတည်းကသူ Mary Winkler ၏သမီးသုံးယောက်ယောက္ခမသူမ၏များ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြပြီ။
မာရိသညျ Winkler လွတ်မြောက်လာ 67 နေ့ရက်များပြီးနောက်
သြဂုတ်လ 14, 2007
မာရိသညျ Winkler တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးစက်ရုံအတွက်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်အရှိဆုံးအရာကသာ 67 ရက်, တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ကုသမှုနှစ်လအကြောင်းကိုလျှက်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
မာရိသညျ Winkler 210 နေ့ရက်များထောင်ဒဏ်
ဇွန်လ 8, 2007
တစ်ဦးက Tennessee ပြည်နယ်တရားသူကြီးသူမ၏ဆန္ဒအလျောက်လူသတ်မှုခံယူချက်များအတွက် 210 ရက်ပေါင်းထောင်ချမာရိ Winkler ထောင်ဒဏ်။ သူမသည်အမှန်တကယ်အကျဉ်းလိမ့်မည်သာရက်ပေါင်း 60 ထွက်ခွာနှောင်ကြိုးလုပ်မတိုင်မီ Winkler သူမကထောင်ဒဏ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အချိန်များအတွက်အကြွေးရပါလိမ့်မယ်။
ဇွန်လ 7, 2007
သူမကပင်သူမ၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်အောက်ပါထောင်ဒဏ်ထားပြီးမတိုင်မီမာရိသညျ Winkler, သူသေဆုံးဘို့အလူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားဝန်ကြီးရဲ့ဇနီး, သစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။ ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများတရားသူကြီးကဂျူရီစကားကိုနားထောငျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သူမ၏စမ်းသပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသက်သေခံချက်စဉ်အတွင်းလုပ်အများအပြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရှာဖွေလျက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
ဧပြီလ 19, 2007
တကျိပ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားနှစ်ဦး၏တစ်ဦးကဂျူရီသူမ၏ခင်ပွန်း၏ ShotGun ပစ်ခတ်မှုသည်သေခြင်း၌မိမိဆန္ဒအလျောက်လူသတ်မှုရိ Winkler အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်ဥပဒေအရမိမိဆန္ဒအလျောက်လူသတ်မှုတစ်ခုခံယူချက်ဝါကျ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေလြှို့ဝှကျစကားနှင့်အတူသုံးခြောက်လမှနှစ်ပေါင်းတစ်ဝါကျသယ်ဆောင်။
မာရိသညျ Winkler သေနတ်ပစ်မတော်တဆခဲ့ Says
မာရိသညျ Winkler သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့သေးငယ်တဲ့-မြို့တရားဟောဆရာရဲ့ပြည်သူ့ပုံရိပ်ကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောလူဂျူရီကိုပြောသည်နှင့်သူသည်အတိတ်တွင်သူမ၏ပြုသကဲ့သို့သူ့ကိုမှာထောက်ပြအဖြစ် ShotGun မတော်တဆ "စန်းသွားလေ၏" ဟုပြောသည်။
မာရိသညျ Winkler: 'ငါ့အရုပ်ဆိုးထွက်လာ၏' '
ဧပြီလ 14, 2007
မာရိသညျ Winkler ၏လူသတ်မှုတရားခွင်အတွင်းဂျူရီလူကြီးသူမကိုဝန်ကြီးခင်ပွန်းရိုက်ကူးဖို့သူမ၏မောင်းနှင်ခဲ့ကြပေမည်အရာကိုတစေ့တစောင်းတယ်။ သူမရောက်မှီသူမ၏မှာထောက်ပြခဲ့သကဲ့သို့ကာကွယ်ရေးအဆိုအရ Winkler သူ့ကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းပြောဆိုရ, မဿဲ Winkler မှာသေနတ်ထောက်ပြသည်။
ဧပြီလ 9, 2007
ဂျူရီရွေးချယ်ရေးမာရိသညျ Winkler ၏လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ယနေ့စတင်စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါတရားခွင်တွင်နေထိုင်သူများကိုသတ်မယ့်ဆိတ်ငြိမ်, demure တရားဟောဆရာရဲ့ဇနီးစေသောအဘယ်အရာကိုတွေးမိဘယ်မှာ Selmer ၏သေးငယ်တဲ့ Tennessee ပြည်နယ်မြို့မှအဖြေကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး။
သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဇနီးများအတွက် trial သတ်မှတ်မည်ဧပြီ 9
ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2007
မာရိသညျ Winkler ၏တရားခွင်ဧပြီလ 9, အစိုးရရှေ့နေများနှင့်ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများနှစ်ဦးစလုံးအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့ရက်စွဲတစ်ခုအဘို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည်လူတိုင်းကိုဒီကြိုးစားခဲ့ရဖို့အဆင်သင့်သည်ထင်," Winkler ကာကွယ်ရေးရှေ့နေ, စတိဗ် Farese Sr; ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 15, 2006
မာရိသညျ Winkler $ 750,000 နှောင်ကြိုးအပေါ်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။
တရားသူကြီးသူမ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များအကဲဖြတ်နှင့်သူမ၏အာမခံ posted သော Bond ကုမ္ပဏီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ check လုပ်ထားစဉ်သူမ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တစ်ပါတ်ထက်ပိုနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ 6, 2006
တစ်ဦးက Tennessee ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရဲ့ဇနီးသူတို့ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်. စောဒကတက်ပြီးနောက်သူမကသူ့ကိုပစ်သတ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်ထို့နောက်အကျဉ်းထောင်ကနေသူမကိုလွှတ်ပေးရန်နှောင်ကြိုးတောင်းခံကြားနာမှာသက်သေခံချက်သည်နှင့်အညီ, သူကသူတို့အိမ်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာသေဆုံး တင်. အဖြစ် "ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး" သူ့ကိုသို့ပြောသည်။
ဇွန်လ 12, 2006
တစ်ဦးကအစားထိုးမူလတန်းကျောင်းဆရာနှင့်အသင်းတော် parsonage အတွက်အသေသတ်ခြင်းကိုရိုက်ချက်တွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦးန်ကြီး၏မယားအာဏာပိုင်များသူမကမဿဲ Winkler, 31 သတ်ပစ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းယုံကြည်ဆိုလိုတာကပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုများအတွက်စွဲချက်တင်ထားသည်။
မတ်လ 24, 2006
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ Tennessee ပြည်နယ်ဗျူရိုမာရိသညျ Winkler များအတွက်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုစွဲချက်, Selmer ၏ဇနီး, Tennessee ပြည်နယ်သင်းအုပ်ဆရာမဿဲ Winkler တခုတခုအပေါ်မှာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။
Tennessee ပြည်နယ်သင်းအုပ်ဆရာအသေခံလေပြီ, ပျောက်ဆုံးမိသားစု
မတ်လ 22, 2006
တစ်ဦးက Tennessee ပြည်နယ်ဘုရားကျောင်းသင်းအုပ်ဆရာသူဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဥ့်န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖွင့်ပြသရန်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်သေနတ်နှင့်တစ်ဦး statewide Amber အချက်ပေးသည်သူ၏ပျောက်ဆုံးနေဇနီးနှင့်လူငယ်သုံးဦးသမီးတို့အဘို့ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
Kenisha Berry ဟာတစျခုမှာမွေးကင်းစကလေးသေဆုံးနှင့်နောက်ထပ် Kill ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်
ရာဇဝတ်မှုကိုယ်ရေးဖိုင်: အဆိုပါ Debra အီဗန်ဖြစ်ရပ်မှန်
တေလာ Behl ၏လူသတ်မှု
အဆိုပါအများစုမှာ Notorious ပြန်ပေးဆွဲ
ဟန္န Wilson က၏လူသတ်မှု
Rene Laennec နှင့် Stethoscope ၏တီထှငျခဲ့
အရစ္စတိုတယ်တို့က 30, Quotes
4 Paso တစ် seguir cuando အစိမ်းရောင်ကဒ် es extraviada ဏ robada fuera က de ယူအက်စ်အေ
မက္ကဆီကန်အမေရိကန်စစ်ပွဲ: ဗိုလ်ချုပ်ကို Zachary Taylor က
ငါဘေ့သို့မဟုတ်ဂစ်တာ Play သငျ့သလော
SUNY သို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
စပိန်အတွက် 'ငါ Wonder' 'ဟု
တစ်ဦးက Style ကိုရွေးချယ်ခြင်း
အကြိုက်ဆုံး Talk ကိုပြရန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် High School တွင်ထံသို့ ဝင်. အဘယ်မှာရှိ
သင်ဟာအရမ်းအဟောငျးပုံစကိတ်စီးခြင်း Begin Be နိုင်သလား?
အယ်လ်ဘမ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: တစ်စစ်မှန်သောပုံပြင်အပေါ်အခြေခံပြီး ...
အဆိုပါ 12 Weirdest တိရိစ္ဆာန်အမည်များ
101 ပန်းချီ: တစ်ခုဒီလိုပါပဲ Paint ကဘာလဲ?
ပိုးဟပ်, အမိန့် Blattodea
Navarre ၏ Berengaria: ရစ်ချတ်ငါဘုရင်မဖှဲ့